Posted by ကို Tranquillus | AVR 27, 2018 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ထဲမှာလှည့် ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ, ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားနိုင်အောင်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။
အမှုအရာရှုပ်ထွေး get အဘယ်မှာရှိတော်ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်သည့်အခါဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျနော်တို့တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုတင်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဇန်နဝါရီလ 1, ။ ရလဒ်: အနှစ်ကုန်မှာ, သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှကိုဖန်ဆင်းသည်။
ဤတွင်ရည်မှန်းချက်များ setting တချို့အကြံပေးချက်များရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်တွင်စောင့်ရှောက်လော့။
1 သိကောင်းစရာ: ဤရည်မှန်းချက်ဟာမင်းအတွက်ပါလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေး
အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်အချို့သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့မဟုတ်မိသားစု၏မိတ်ဆွေများကလွှမ်းမိုးနေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်လိုချင်သောအရာမဟုတ်ပါ။
သင်ဤဖြေကြားခဲ့ကြပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏ tenable ရည်မှန်းချက်ဖြစ်စေမည်။
2 သိကောင်းစရာ: သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ချရေး
ဒါဟာစကားလုံးများကိုပျံသွားနှင့်အရေးအသားများရှိနေဆဲ, လူသိများသည်။ ဒါကြောင့်စာရေးသားခြင်းဖြင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်က start ကိုစောင့်ရှောက်ရန်။
3 အကြံပေးချက်: ချိန်ညှိစေတှနျ့ဆုတျပါဘူး
ဤသည်, သင်သည်အတော်လေးဆန့်ကျင်အရှုံးမပေးမဆိုလိုပါ။ သင်အချိန်မယူကြပါလျှင်, ကအရေးမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာစိတ်ပျက်အားလျော့ခံရဖို့မအရေးကြီးပါသည်။
4 အကြံပေးချက်: တစ်ချိန်ကမှာများလွန်းရည်မှန်းချက်များသတ်မှတ်ထားပါဘူး
ဒါဟာတိုင်းတာဆက်ရှိနေဖို့နဲ့တခါမှာအတော်ကြာရည်မှန်းချက်များ programming အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မရှိပါတယ်။
စတင်ရန်2သို့မဟုတ်3ပန်းတိုင်ကပ်, သငျသညျစောငျ့ရှောကျဖို့သင့်ဘက်မှာတိုင်းအခွင့်အလမ်းကိုတင်ထားရမည်။
သိမှတ်ဖွယ် 5: ဖွဲ့စည်းရ
သွန်းလောင်း သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုစောင့်ရှောက် ဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးချင်းစီခြေလှမ်းသတ်မှတ်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
ကသေးငယ်တဲ့အမှုအရာသည်အလျှင်ပင်စတင်ရန်ယူဖို့အတွက်လာမယ့် action ကို Specify ။ သင်ကရှေ့ကိုရွှေ့နှင့်သင်ကလှုံ့ဆျောခံစားရပါလိမ့်မယ်။
သင်ရှယ်ယာစာရင်းပြုစုချင်သော tool ကိုသုံးပါ။
သိမှတ်ဖွယ် 6: ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မဖြစ်နိုင်သောမဟုတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်
သိပ်ရည်မှန်းချက်ကြီးသို့မဟုတ်ချက်များမရရှိဤတစ်မှန်ဘီလူး fixed ဖြစ်ပါတယ်အခါသင်နားထောင်သောအရာတို့ကို၎င်းဖြစ်ကြ၏။
tenable ရည်မှန်းချက်များဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ? နိုဝင်ဘာလ 25th, 2018Tranquillus
မြန်ပြီးတော့အကျပ်အတည်းကိုဒူပင်ပန်းပြင်းထန်တဲ့ မှစ. သာ. ကောင်း၏သင်ဟာ-ကိုသတိရပါ-Exit ကိုလေ့လာပါ